Minakohofa amin’ny Mpamorona
"Miankohofa eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. " Apôk. 14:7.
Ny fiankohofana eo anatrehan'Andriamanitra dia mifototra eo amin'ny maha-Mpahary Azy ary avy Aminy no isian'ny zavatra hafa rehetra. (...)
Ao amin'nyApôkalipsy 14, dia antsoina ny olona hiankohoka eo anoloan'ny Mpamorona; ary asehon'ny faminaniana ny antokon'olona iray, izay mitandrina ny didin'Andriamanitra ho vokatry ny hafatra telo sosona. Ny iray amin'ireo didy ireo dia manondro mivantana an'Andriamanitra amin'ny maha-Mpamorona Azy. Hoy ny ambaran'ny didy fahefatra: «Fa Sabatan'i Jehôvah Andriamanitrao ny andro fahafito (..) henemana no nanaovan 'i Jehôvah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina, mbamin'izay rehetra ao aminy, dia nitsahatra Izy tamin'ny andro faliafito, izany no nitahian'i Jehovah ny andro Sabata sy nanamasinany azy». Mikasika ny Sabata dia hoy Jehôvah : «famantarana (...) ahafantaranareo fa Izaho no Jehôvah Andriamanitrareo», izany. (...)
Ny maha-zava-dehibe ny Sabata amin'ny maha-tsangambaton' ny famoronana azy dia izy nampahatsiaro mandrakariva ny tena antony tokony hiankohofana amin'Andriamanitra - satria Mpamorona Izy, ary isika noforoniny.
«Noho izany ny Sabata dia tena fototry ny fanompoana an' Andriamanitra mihitsy, satria mampianatra io fahamarinana lehibe io amin'ny fomba manaitra indrindra izy, ary tsy misy fanorenana hafa (nataon'Andriamanitra) manao izany. Ny tena fototry ny fanompoana an'Andriamanitra, tsy amin'ny andro fahafito ihany, fa ny fanompoana azyrehetra, dia hita eo amin'ny fahasamihafan'ny Mpamorona sy ny noforonina. Tsy azo atao na oviana na oviana izany».-J. N. Andre.ws, History of the Sabbath, toko 27. Mba hitazonana io fahamarinana io ao an-tsain'ny olona mandrakariva no nanorenan'Andriamanitra ny Sabata tany Edena; ary raha mbola ny maha-Mpamorona antsika Azy ihany no antony tokony hiankohofantsika eo anatrehany, dia mbola ho famantarana sy tsangambato ihany ny Sabata, dia ho voatarika ho eo amin'ny Mpamorona ny saina sy ny fitiavan'ny olona, amin'ny maha-tokony hanajana Azy sy hiankohofana Aminy, ary tsy ho nisy na oviana na oviana mpanompo sampy, na mpandà ny fisian'Andriamanitra, na tsy mpino. Ny fitandremana ny Sabata no famantarana ny firaketam-po amin'Andriamanitra marina, «Ilay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny loharano». (...) — HM, tt. 450-452.